वीएफएम १५ औं वर्षमा प्रवेश – BFM 91.2
वीएफएम १५ औं वर्षमा प्रवेश
विराटनगर, ४ फागुन । पूर्वमा सर्वत्र, विराटनगरको उत्कृष्ठ वीएफएम ९१.२, स्थापनाको १४ वर्ष पुरा गरि आज देखि १५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । शत प्रतिशत तपाईको सुन्दै जाउँ, सुनाउँदै जाउँ भन्ने मुल नाराका साथ वीएफएमले समाचार, सामाजिक तथा मनोरञ्जनात्मक लगायतका कार्यक्रम नियमित रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
१५ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा विराट श्री मिडिया नेटवर्क प्रालि (वीएफएम) का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले श्रोताको मायाँले एफएमले नयाँ उचाई प्राप्त गर्दै गएको बताउनुभयो । एफएमले छोटो अवधिमै आफ्नो गरिमा उच्च बनाएको अध्यक्ष डा. कार्कीले बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्र समाजको मार्गदर्शक भएकाले यो जिम्मेवारीलाई गहन ढंगले महसुस गरि अघि बढ्नुपर्ने मा उहाँले जोड दिनुभयो ।
बार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक डा.सन्देशदास श्रेष्ठले बर्तमान अवस्थामा देशका सम्पूर्ण मिडियाहरु जिम्मेवार सत्य र सहि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा जनताको हक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर खवरदारी गरिरहने बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को अवस्थामा पनि एफएमले निरन्तर रुपमा सूचना, सन्देश प्रवाह गर्न सफल रहेको बताउनुभयो ।
श्रोताले विज्ञापनलाई सूचनाका रुपमा लिन नसक्दा चुनौति थपिएको कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो । एफएम दैनिक विहान ५ वजेदेखि राती ११ वजेसम्म प्रसारण भईरहेको छ । एफएमले बार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी फागुन ७ गते कार्यालय परिसरमा प्रदेश १ स्तरिय गजल प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
← कोसी अस्पताल विस्तारको बाटो खुल्यो
विपद सूचनाको व्यवस्थापन →
राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख प्राप्तिका लागि एकतावद्ध हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान
November 15, 2020 November 15, 2020 Bfm	0
इलामका दुर्गाप्रसादको उपचार विराट शिक्षणमा सुरु
April 5, 2021 April 5, 2021 Bfm	0